Fikarohana momba ny firaisana Maty i George Hopkins, tsy mahatsapa fa maty izy, ka ampidirina any an-danitra alohan'ny fianakaviany, alika sy sakafony, izay ankafiziny ny orinasa mirona sy ny omby - Fikarohana Reincarnation
Ny tantsaha George Hopkins dia maty rehefa mijinja ary tsy mahatsapa fa maty izy
Tao amin'ny Leslie Flint mivantana mivantana fandaharana feon-kira natao tamin'ny 11 1959, tantsaha iray nantsoina hoe George Hopkins. Nanontany an'i Hopkins i Betty Greene hoe maty izy. Namaly izy hoe:
“Eny, vao avy tapaka lalan-dra aho, na voan'ny aretim-po na aretim-po. Na zavatra toy izany. Raha ny zava-misy dia nijinja aho. Nahatsiaro somary rendremana aho, somary hafahafa, ary tsy maintsy nigadona. Saingy malala, ry malalako, nanaitra be ahy izany.
Nifoha aho, raha nieritreritra. Nidina ny masoandro. Ary nisy ahy, na izay niseho tamiko. Tsy vitako mihitsy ny namoaka izany, dia gaga aho. Niezaka nihozongozona ny tenako aho hamoha ny tenako. Noheveriko fa mampihomehy izany. Tsy maintsy manonofy aho. Tsy afaka ny ho lohany na rambo aho. Tsy namono ahy na oviana na oviana aho fa maty.
Na izany na tsy izany dia hitako nandeha teny amin'ny làlana mankamin'ny dokotera aho. Nieritreritra aho, angamba, afaka manampy ahy izy. Nandondom-baravarana aho, fa tsy nisy namaly. Nieritreritra aho, tsara, tsy tokony ho nieritreritra aho hoe ho any ivelany izy satria misy olona miditra amin'ny varavaran'ny fandidiana.
Nahita ny iray na roa tamin'ireo namako taloha aho. Toa izy ireo no nandeha tamiko. Tsy nisy olona toa nanamarika ahy.
Nijanona teo aho mba hikatsahana azy io. Avy eo dia nahita olon-kafa izay nandeha haingana teny an-dàlambe aho. Nihazakazaka izy, nanindry ahy sy ny rehetra, ary ny fotoana manaraka dia naheno azy ireo miresaka ahy. Nieritreritra aho hoe inona ny hadisoan'ny helo? Inty aho! Reko fa nilaza izy ireo fa maty aho!
Niditra tao anaty fiarany teny an-dalana ilay dokotera, ary nihevitra aho fa tsy fantatro ny hoe maty. Tsy afaka maty aho. Inty aho. Ahoana ny fomba hahafatesan'ny helo?
Ny zavatra manaraka dia hitako fa noraisin'izy ireo ny vatako ary namerina azy indray. Napetrany tao amin'ny trano fiangonana izany.
'Oh ry malalako,' hoy aho nieritreritra, 'ity no mololo farany. Tsy maintsy maty aho. '”
George, amin'ny maha-Fanahy azy, dia manantona ny ministerany eo an-tsoroka ary mampiaka-peo Azy
“Noheveriko fa ny zavatra tsara indrindra tokony hatao dia ny mandeha mijery ny parson. Azo antoka fa hahalala zavatra izy.
Niakatra tany amin'ny vicarage àry aho ary niandry. Nahita azy niditra aho ary nipetraka teo amin'ny latabany. Tsikaritro fa tsy misy mafy. Raha nipetraka teo amin'ny seza aho, amin'ny lafiny iray dia nipetraka aho, nefa tsy nanao izany. Tsy nahatsapa lanja teo ambaniko aho.
Hitako ny endriny taloha. Tonga izy, nandeha an-tongotra taty aoriana, nandeha tany amin'ny biraony, nanomboka nanoratra taratasy sy nanao zavatra. Nanomboka niresaka taminy aho. Raha tsy nitandrina izy!
Nieritreritra aho hoe: 'Izy dia tahaka ny sasany tamin'izy ireo. Tokony ho nieritreritra aho fa hahalala zavatra. '
Ka nokapohiko ny soroka. Raha vantany vao nitodika izy dia toy ny nieritreritra fa nisy zavatra tao, ary nieritreritra aho hoe: 'Somary mandeha kely aho', dia nokapohiko indray izy. Tsy nandray fampandrenesana izy. Avy eo dia nitsangana izy ary nanozongozona ny tenany ary avy eo heveriko fa nangovitra izy. Karazana maraina mendrika iny. Tsy hitako izay antony tokony hahatsapany ho mangatsiaka.
Na izany na tsy izany, toa tsy tsapany akory fa teo mihitsy aho. Nieritreritra aho hoe: 'Tsy ho tonga eto aho.' ”
George dia manara-maso ny vatany halevina ary raisina ho an'ny fiainanan'ny vadiny avy amin'ny vadiny sy ny Rahalahy
“Nentin'izy ireo nidina tany amin'ny tokotanim-piangonana taloha tao anaty boaty ny vatako, ary napetrak'izy ireo tao amin'ilay vehivavy antitra aho. Tonga saina tampoka tamiko momba ny Poll, vadiko.
Nieritreritra aho hoe: 'Mampihomehy izany. Raha toa ny nahafatesako dia tokony hiaraka aminy aho. Aiza izy? '
Nijoro teo aho nijery azy ireo nametraka ity vatako ity tao am-pasana. Taorian 'ny lanonana dia nandeha teo aoriany aho. Tao, teo anoloako no nanatona ahy, ny vadiko!
Saingy tsy ny vadiko toy ny nahalalako azy tamin'ny taona vitsy lasa, fa tahaka ny nahalalako azy fony izy mbola kely. Toa tsara tarehy izy, tena tsara tarehy. Ary niaraka taminy aho dia nahita ny iray tamin'ireo anadahiko maty tamin'izy tokony ho 17 na 18 taona. Zazalahy tsara bika sy fotsy volo. Nihomehy sy nivazivazy izy ireo ary nanatona ahy. Ny vadiko sy ny rahalahiko dia nanakorontana ahy, nilaza fa malahelo izy ireo fa tara izy ireo.
Hoy izy ireo: 'Fantatray fa tsy nanao izany ianao, saingy tsy fantatray fa ho avy tampoka tahaka anao ianao. Nahazo ny hafatra izahay fa miala tsiny fa tsy afaka tonga haingana kokoa izahay. '
Noheveriko fa hafahafa izany. Ahoana no ahatongavan'izy ireo? Fantatro fa nahazo ilay izy aho, fa raha ny fahitako azy dia toa nandehandeha aho, sahala amin'ny nataoko teo aloha ihany, afa-tsy ny maivana kokoa. Toa tsy nanana vesatry ny vatana intsony aho, ary tsy nisy fanaintainana sy fanaintainana toy ny taloha intsony. Nilaza izy ireo fa mila manamboatra karazana fanitsiana sy milamina aho.
Ka hoy aho: 'Miresaka ny amin'ny hipetrahana ianao. Aiza ny kambana honenanay? Toa tsy misy olona te hifandray aminay, ary toa tsy misy miraharaha. '
'Marina izany. Aza manahy momba azy ireo. '
Nambarako taminy ny momba ny paompy.
'Tsy te-hahita azy ianao', hoy izy ireo. 'Izy no farany nandeha nijery. Kely noho ny olon-kafa fantany. Salama tsara ianao. '
Ny vady sy anadahy efa nodimandry George dia nitondra azy tany an-tranony any an-danitra, izay fantany tamin'ny fitsidihana nandritra ny nofy
“'Fa ho aiza anefa isika?'
'Hentinay any an-tranonay ianao.'
'Oh, tsy afaka milaza aminao marina izay misy azy izahay', hoy izy ireo. 'Nefa afaka mitondra anao ho any izahay, ary tsy ho ela dia ho tsapanao fa ao an-trano daholo izao. Ho hitanao izany. '
'Ahoana no ahalalako azy? Tsy mbola tany aho. '
'Oh, eny manana ianao. Imbetsaka ianao no natory. Raha ny marina dia fantatrao tsara izany. '
Nieritreritra aho hoe: 'Nanonofy hafahafa aho taloha. Indray mandeha na indroa tadidiko ny nanonofy momba toerana tena tsara miaraka amin'ny zaridaina mahafinaritra, ary teo ilay alika taloha Rover, izay maty taona maro talohan'izay. Tadidiko fa nieritreritra aho taloha fa manonofinofy fotsiny. '
'Tsy izany tsy nanonofy. Ianao no niaraka taminay rehefa natory ianao rehefa natory ny vatanao. Rehefa natory ny vatanao dia afaka ny sainao ary afaka nandeha sy niaraka taminay ianao. ”
'Tsara be izany, hoy aho.'
'Tsy tsapanao ve fa hafa ianao?' hoy izy ireo.
'Hafa mihitsy ny fahatsapako. Tsy mahatsiaro ho antitra aho. Tsy manana fanaintainana sy fanaintainana taloha toa ahy taloha intsony aho. '
'Nahita ny tenanao va ianao?'
'Tsia, tsy mba nieritreritra an'izany aho.'
'Eny ary, hasehoko anao.'
Nieritreritra aho hoe: 'Tena hahaliana ahy ny mahita ny tenako. ” Ary avy eo, 'afaka nijery fitaratra aho.'
'Tsia, hoy izy ireo. 'Tsy eo amin'ny fitaratra.'
Ka nentin'izy ireo tany amin'ny toerana tena tsara tarehy aho, nisy toerana mahafinaritra sy toerana mahafinaritra ary trano tsara tarehy kokoa noho ny tanàna. Nentin'izy ireo tany amin'ny trano iray tamina saha mahafinaritra aho. Ary io toerana kely io ihany no nanofisako, na noheveriko fa nofinofisiko. Ary tao amin'ny nofiko aho taona vitsivitsy lasa izay.
Tsaroako fa nifoha tamin'ny maraina be aho ary nahatsiaro izany, ary nihevitra aho fa nofy mahatsikaiky izany. Toy izany koa!
Georges Maty maty i Dog Rover sy ny vondron'ny havana dia faly mandray azy any amin'ny trano vaovao any an-danitra miaraka amin'ny fihanaky ny sakafo
“Ary teo ilay alika taloha nihazakazaka ary nanetsiketsika ny rambony ary nitsambikina sy nidina.
Nosokafako ny varavarana ary niditra aho, ary nisy fiangonana iray teo ho eo tamin'ireo olona am-polony fantatro. Rahalahiko iray sy anabavy iray, ny vadiko dia teo izy ireo, nankafy sy nankasitraka ahy ary nahatonga ahy ho tezitra. Raha ny tena marina, nisy tabataba be dia be nipoitra, nidradradradra ary niresadresaka nandritra ny fotoana fohy, ny alika barking, tena fiverenana marina izany. Nahazo sakafo tsara ho ahy ry zareo. Ho gaga ianao.
Izany no nahatonga ahy ho hafahafa. Noheveriko fa tsy tokony hieritreritra aho hoe manana dite izy ireo eto ary nipetraka sy nihinana zavatra.
Hoy izy ireo: 'Eny, tamin'ny voalohany. Angamba tsy antenainao izany, fa zavatra efa nahazatra anao izany, ary tianay ny hahatonga anao hahatsiaro ho any an-trano. Manampy anao hilamina izany. Na eo aza izany, ho salama tsara ianao izao. Manana Poll sy alika ary izahay ianao. Hifandray aminao foana izahay ary hahita anao hatrany hatrany. '
Tsapako tampoka fa afaka mahita ny tenako aho, tsy toy ny fahitako ny tenako teo amin'ny fitaratra, fa toy ny tenako vao voalohany. Hoy aho tamin'ny olona rehetra: 'Tena mahafinaritra, tsy hitako izay holazaina. Tsy hitako izay hatao. '
Hoy izy ireo: 'Aza miteny na inona na inona, tsy manao na inona na inona mandritra ny fotoana fohy ianao. Mialà sasatra fotsiny, mifalia ary miala sasatra ary mahazoa tohina, eny, mandalo ianao no miantso azy. '
'Eny,' hoy aho, 'Tsy azoko daholo izany. Tena voajanahary daholo izy rehetra, tena misy daholo. Eto ianao, ny olona tiako rehetra, ny olona rehetra izay tena nisy dikany tamiko teo amin'ny fiainana, eto daholo miandry ny handray ahy sy hampifaly ahy. Ary eo ireo olona rehetra any izay noheverinao fa hanana zavatra kely tsy fantatra, indrindra ny parson. Fantatro fa tsy mpiangona aho. Tsy nandeha ara-dalàna aho. Fa toa tsy mahalala n'inona n'inona izy. Toa tsy afaka nampionona olona izaitsizy izy. Inona no olana?'
'Eny,' hoy izy ireo, 'tsy tokony hanome tsiny ny parson taloha ianao. Manao izay tsara indrindra vitany izy, ao anatin'ny toe-javatra sarotra mety. Nefa hitanao fa tsy nahazo ny faran'ny hazo marina izy ireo. '”
Biby, biby fiompy ary biby hafa any an-danitra
Nifarana ny fivoriana avy eo. George Hopkins dia niverina niresaka tamin'ny alàlan'ny feon-kira mivantana nataon'i Leslie Flynn taty aoriana. George Woods dia nanontany azy hoe: '”Inona no ataonao izao?”
“'Eny,' hoy i Hopkins namaly: 'Tena liana amin'ny omby aho.'
'Manana omby any ianao?'
'Eny, ary manana soavaly izahay. Tena tiako be ny biby sy soavaly indrindra. Tiako ny omby ary manana omby eto izahay. Fa nahoana no tsy? Manana tanimbilona mahafinaritra izahay, saha sy biby mahafinaritra toa anao. Miaina akaikin'ny natiora ny tsirairay. Tsy misy ny famonoana olona. Manana ny zaridainako tiako be aho. Manana ny ombiko aho. Te-handeha an-tongotra aho, ary te-mitaingin-tsoavaly izay zavatra tsy nananako fotoana firy hatao teo amin'ny fiainana, na dia niasa tamin'ny tany aza aho. Toa tsy nahavita nanao zavatra toa ny mitaingina soavaly mihitsy aho. Mandehana eo alohan'ny soavaly, eny. Fa ny amin'ny mitaingina, dia tena mahalana. '
Betty Greene dia nanontany avy eo hoe: 'Hitanao ve ny omby, ny biby, manana fahatsiarovan-tena avo lenta kokoa, ireo izay atrehinao? Azon'izy ireo ve ny anao? '
'Ie, tena hiteny aho hoe eny. Mazava ho azy fa nanao izany izy ireo. Ary avy eo indray, heveriko fa rehefa eto an-tany ny olona iray, dia mirona hanao ambanin-javatra ny fahalalàn'ny omby.
Rehefa dinihina tokoa, manana ny fihetseham-pony sy ny fihetseham-pony izy ireo, ary tsy biby tsy mahay mandanjalanja izy ireo, fantatrao. Mazava ho azy, fantatro fa tokony ho nieritreritra aho fa tsy nilaina ny nihinana hena, satria misy karazan-tsakafo maro hafa azo iainana ny olona. Ary rehefa dinihina tokoa, heveriko fa ny biby dia manana zon'ny fiainana mitovy amin'ny an'ny olombelona. Raha ny tena izy, betsaka kokoa amin'ny tranga maro no tokony hoeritreretiko. '”